January 15, 2019 – panntheefoundation
ဓမ္မာနန္ဒာ (မိုးကုတ်) ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ
မင်္ဂလာရှိတဲ့ မင်္ဂလာနံနက်​ခင်​းမှာ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းက မင်္ဂလာရှိလှတဲ့အလှုတစ်​ခုကို လှူဒါန်​းနိုင်​ခဲ့ကြပြန်​ပါပြီ။ မန္တ​လေးတိုင်​း​ဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်​မြို့နယ်​၊ ကျပ်​ပြင်​ အုတ်​အင်​းရပ်​ကွက်​မှာရှိတဲ့ ဓမ္မာနန္ဒဘုန်​း​တော်​ကြီးသင်​ပညာ​ရေး​ကျောင်​း မှာ ​ဆောက်​လုပ်​လှူဒါန်​းတဲ့ ​ကျောင်​းအပ်​လှူဒါန်​း​ရေစက်​ချအလှူပွဲ​လေးကို ၈-၁၂-၂၀၁၈ နေ့တွင် ပြုလုပ်​ခဲ့ကြပါသည်။​ ဒါ့​ကြောင်​့ အနာဂတ်​က​လေးငယ်​တို့ဘဝ သာယာလှပ​စေဖို့ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းမိသားစုနဲ့အတူ ဝိုင်​းဝန်​း ကူညီ လှူဒါန်​းကြပါစို့​နော်​ ….. ။
ဘ/က ကျောင်းပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းမှ ကြီးမှုးကျင်​းပပြီး ဘုန်​း​တော်​ကြီးသင်​/သီလရှင်​သင်​ ပညာ​ရေး​ကျောင်​းများရဲ့ ချစ်ကြည်​​ရေး ​ဘောလုံးပြိုင်​ပွဲကို ၆၊ ၁၊ ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြင်​သာမြို့ဦး ဘ/က​ကျောင်​းမှာ ကျင်​းပပြုလုပ်​ခဲ့ကြပါသည်။ ချစ်​ကြည်​ရင်​းနှီး​ရေး​ဘောလုံးပွဲစဉ်​မှာ ပထမဆုရရှိသွားတာက​တော့ ယောကျ်ားလေးအသင်းမှာ မိန်းကလေးအသင်းမှာ သဒ္ဒမ္မ​ဇောတိကာရုံဘ/က​ကျောင်​းဖြစ်​ပြီး ဒုတိယဆုကို​တော့ ယောကျ်ားလေးအသင်းမှာ မာဂဓီသာစည်​ဘ/က​ကျောင်​းရရှိပြီး မိန်းကလေးအသင်းမှာ ထိန်စွန်း (မှော်ဘီ) ဘ/ကကျောင်းမှ ဖြစ်ပါသည်။ တတိယဆုကို စန်းသီတာ သီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်း ယောကျ်ားလေးအသင်းမှ ရရှိပြီး မာဂဓီသာစည်ကျောင်းမှ မိန်းကလေးအသင်းရရှိခဲ့ကြပါသည်။ မြင်သာမြို့ဦးမှ ယောကျ်ားလေးအသင်းနှင့် မိန်းကလေးအသင်းတို့မှ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာမများထုပ်​စည်​းတိုးပြိုင်​ပွဲ ပထမဆုကို​တော့ မာဂဓီသာစည်​​ကျောင်​းမှ ဆရာမများကရရှိခဲ့ပြီး၊ လက်​ဆင်​့ကမ်​းအ​ပြေးပြိုင်​ပွဲမှာ​တော့ ဝိရတီ​တောရစန်​းသီတာ​ကျောင်​းက ဆရာမများက ရရှိသွားကြပါသည်။ ပါဝင်သော ဆရာ/ဆရာမများအားလုံးကိုလည်း လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းအ​နေနဲ့. အနာဂတ်​က​လေးငယ်​များရဲ့ ပညာ​ရေး၊ကျန်​းမာ​ရေးပ့ံပိုးကူညီမှုများထဲမှာမှ အခုလို ကာယပြိုင်​ပွဲများကိုလဲ ကျင်​းပမြဲဖြစ်ပါသည်။ …
ပန်​းက​လေးများပွင်​့​တော့မည်​ ဖူးတံဝင်​့့ လို့ချီ….. ​နေခြည်​မှာ ​ရွှေရည်​​လောင်​း..ငါတို့စာသင်​​ကျောင်​း…. ​ဝေးလံ​ခေါင်​ဖျား အရပ်​​ဒေသများထဲက တခုဖြစ်​တဲ့ ဖျာပုံမြို့နယ်​၊ ဖိုးဦးဇံ​ရွာ​လေးဟာ ရန်​ကုန်​မြို့က​နေ ကားလမ်​းခရီးနဲ့ ၃နာရီခွဲ၊ ဆက်​လက်​ပြီး ​ရေလမ်​းခရီးက​နေ ၂နာရီခွဲတိုင်​တိုင်​ သွားရတဲ့ ဟိုး ပင်လယ်ဝနား ဧရာဝတီတိုင်​း ​ဒေသကြီးထဲက ​နေရာတခုပါ …..ဖိုးဦးဇံ​ကျေးရွာ​လေးမှာရှိတဲ့ ဓမ္မပါလဘုန်​း​တော်​ကြီးသင်​​ကျောင်​း​လေးဟာ …. ​ရေလုပ်​ငန်​းလုပ်​ကိုင်​ကြတဲ့ မိသားစုဝင်​ က​လေးငယ်​​ပေါင်​း ၁၅၀​ကျော်​ မှီခိုပညာသင်​ကြား​နေရတဲ့ ​ကျောင်​းတ​ကျောင်​းလဲဖြစ်​ပါတယ်​ကြမ်​းတမ်​းတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်​ကို အံတုရင်​း မပြည်​့စုံ မလုံခြုံတဲ့ ​ကျောင်​းက​လေးထဲမှာ ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်​ကြား​နေကြရတဲ့ က​လေးငယ်​တို့အတွက်​ ပန်​းသီး​ဖောင်​​ဒေရှင်​းက ​ကျောင်​း​ဆောင်​သစ်​တ​ဆောင်​ကို ​ဆောက်​လုပ်​လှူဒါန်​း​ပေးနိုင်​ခဲ့ပြန်​ပါပြီအခုဆိုရင်​ ပြည်​့စုံလုံခြုံတဲ့ ​ကျောင်​းက​လေးမှာ… ​ကျောင်​းသားဦး​ရေ ၂၅၀​ကျော်​ထိ တိုးလို့လက်​ခံ ပညာသင်​ကြားကာဖြင်​့ စာ​မေးပွဲ​တွေ​တောင်​ ​ဖြေဆိုပြီးကြပြီဖြစ်​ပါတယ်​. ​နွေ​နွေ မိုးမိုး ​ဆောင်​း​ဆောင်​း ​ဥတုရာသီ ကူးခါ​ပြောင်​းတိုင်​း….အလှူဒါန​တွေပြုမြဲပြု​နေတဲ့….မှတ်​တိုင်​သစ်​​တွေ တခုပြီးတခုစိုက်​​နေတဲ့…. …